Ibsi Koree Hoji Raawwachiiftuu ADWUI waan haaraa homaa hin qabu jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Ibsi Koree Hoji Raawwachiiftuu ADWUI waan haaraa homaa hin qabu jedhame
21 Muddee 2017
Jidduu paartilee miseensota Adda Dimokraatawa Warraaqsa Ummattoota Itoophiyaa (ADWUI) tti waldiddaan cimuu xiinxaltoonni siyaasaa ni dubbatu. Walididdaan isaanii kunis caalmaatti tibba walitti bu'iinsi ummattoota jidduutti umamutti cimee mul'ateera.
Yeroo kanatti koreen Koree Hoji Raawwachiiftuu ADWUI walgahii cufaa kan galan. Itti gaafatamaan waajirichaa Obbo Shifarraa Shigguxee walgahiin idilee korichaa kunis dhimmoota biyyattii irratti murteewwan ciccimoo akka dabarsu dubbatanii turan.
Walgahiin ALI Sadaasa 3 bara 2010 eegalee kunis hangamiif akka itti fufu waan beekame hin jiru. Haa ta'u malee kaleessa ibsi walgahichi akka hin xumuramiin agarsiisu tokko waajjirichaan taasifameera.
Ibsichis korichi gamaggama taree raawwii 'waraaqsa haaromsa gadifagoo' bara darbee eegaluusaa eeree jira.
Gamaggama koreen hojii raawwachiiftuu hanga ammaatti taasiseenis walitti dhufeenya dhaabbilee afran paartii ADWUI ijaaran jidduu jiru keessattuu ''yeroo dhihoon asi walshakkuun kan itti baayyatee fi wal amantaa dhabiinsi waljalaan cimaa kan itti dhufe ta'uu'' akka hubatan kaa'eera.
''Walitti bu'iinsi wayita ammaa kanatti badiinsa lubbuu namoota hedduutiif sababa ta'an muummeen kan dadhabinni hoggantoota dhaabbilee keenyaa umeedhaa'' jechuunis haala yaachisaa biyyattiin amma keessa jirtuuf gaheen hoggantootaa olaanaadha jedheera.
Dhumarattis gaaffilee ummattootaa haala quubsaa ta'een deebisuu fi sirna federaalaa haala amansiisaa ta'een eegsiisuuf kallattiiwwan furmaataa babaachisaa ta'an akka kaa'u waadaa galeera.
Dhimmi haaraan hinjiru
Yunivarsitii Finfinneetti gargaaraa profesara Seenaa fi ogummaa Obbo Ababaawu Ayyaaleew ibsa itti fakkeessuuf bahe jedhaniiru.
Sababa yoo eeranis, oduun walii hin galiin hafaniiru jedhu baayyatee ture. Oduu kana fashaleessuu fi ykn haala gaariirratti argamna jechuu barbaadanii ibsa baasan malee, rakkoolee jiraniifi adeemsa walgahiichaa kan bal'inaan agarsiisu miti jedhaniiru.
Hoggansi olaanaan hojii hin raawwanne kan jedhan Obbo Ababaaw, Kunis dhugaa ummanni hundi beekuudha jedhu. Kanarra osoo jijjramaawwan dhufuuf jiran kan nutti himan ta'ee caalaa hiikaa qabaata ture jechuun dubbataniiru.
Obbo Mushee Sammu Pirezidaantiin Paartii Dimokraatawa Itoophiyaa duraanis yaada kanaan walii galu.
Qabxiin ibsichi kaase ADWUI tiif malee ummatichaaf hiikaa hin kennu. Qabxichis kan waggootta 10 darban guutuu ummatichaa dubbachaa tureefi ADWUIn garuu fudhachuu dideedha, jedhaniiru.
Walitti bu'iinsi sanyii biyyattiin ittiin jeeqamaa jirtu waa'ee dhaabbilee barnootaa fi poolisii ilaalchisuun mariin taasifamee jira yoo ta'ee maaliif ibsuu dhiisan? jechuunis gaafataniiru Obbo Ababaawu.
Obbo Musheenis gama isaanitiin, walgahiichaan hataakaaroo malee dhimoota biyyattiin amma irra geesse irratti ejjannoo fudhachuu hin dandeenye jedhaniiru.
Ibsi ADWUI kan ammaas kan walgahiiwwan kanaan dura Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraayiin haasa'amaniifi ka'aa turaniidha. Yaadni kunis walgahii Gandaa irratti ka'ee ture. Waltajjii marii ummataa irrattis ka'eera. Kanaafan ibsichi waan haaraa omaa hinqabu kanan jedheef jechuun ibsu Obbo Ababaawu.
Hojii raawwchisaa fi Ittigaafatamaan quunnamtiin Ummtaa Madrak Obbo Mulaatuu Gammachuu gama isaanitiin ibsichi ifa miti jedhaniiru. Akkuma kana duraa barametti ummaticha sobuuf hoggansa ittigaafatamaa taasisuuf malee dhimma haaraa hin kaafne jedhaniiru.
Kanarra tarkaanfiiwwan humna paartichi gara fuuladuraatti raawwachuuf yaade dhimmoonni agarsiisan jiru. Tarii bulchiinsa sivilii gara bulchiinsa loltummaatti geeddaruuf kan yaadame fakkaata jechuu eeraniiru.
Dhimmi shakkii jedhu anaaf hingallee kan jedhan Obbo Ababaawu, isarra osoo paartiileen OPDO fi kan Amaaraa olaantummaa paartii tokkootiin itti hinfufne jadhanii caalaa naaf gala jedhan. Adeemsa hanga amma tureetti walitti dhufeenya walqixa ta'e hinture. Amma garasitti dhufu qabna yaadni jedhu ka'usaa beeka jedhu.
Gaafiin ummataa waljalaan sadarkaa walshakku amma irratti argaman irraan gahuus ni dubbatu.
Akka Obbo Musheetti dhaabbatichi fedhii ummataa dhiisuun fedhii dhaabbatichaa eegsiisuun waan qabameef shakki kun umamee jedhu.
Dhimmi kunis kan yeroo dheeraa yaadni itti kennamaafi qeeqamaas tureedha jechuun dubatti hafummaa yaada shakkii jedhu qeequ.
Amma kan jirru qarqara allayaatii kan jedhan Obbo Ababaawu, haalli biyyattii kan gara Yamaniifi Soriyaatti kan deemu fakkataa jechuun yaadda'u.
Kunis waan paartichi siyaasa sanyummaa cimseef jedhu. Kanaafuu, jijirama siyaasa sanyii, akkasumas olaantummaa siyaasaafi dinagdee garatokkoo nana hambsa jedhuun eega jedhaniiru.
Obbo Mulaatu garuu gara yaada gaarii hunda fayyaduutti ni dhufe amantaa jedhu hinqabu jedhu. ''Haala danda'ameefiin akka sirnichi itti fufuu gochuuf kan yaalan natti fakkaata.''
Kun ammoo rakkinaafi aarii jiruu kan cimsuufi biyyattii balaarratti kan kufiisuudha jedhaniiru. Kanaanis waldiddaan jiru cimuun gara gaagama'insa tokkummaa biyyaafi ummataatti geedaramu danda'as jechuun yaada Obbo Ababaawu qooddatu.
Paarticha itti fufiinsuufi biyyattiis balaa irraa olchuu kan barbaadan yoo ta'e, lamiilee hunda waliin mari'achuun furmaata fiduuf hojachu qabaatu, jechuun yaada isaani ibsu.
Obbo Musheen gama isaanitiin, walgahiin kun baayyee hicciitiin kan raawwatamu waan ta'eef kun hinta'u ykn ni ta'a jechuun tilmaamuun rakkisaadha jedhaniiru. Ta'us walitti bu'iinsa sanyiitiif furmaata qabate dhufa abdiin qaba jedhaniiru.